Ungayigcina kanjani ipulasitiki phansi - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ungayigcina kanjani ipulasitiki phansi
Ukubekwa phansi kwepulasitiki kunezinzuzo zokuba ezomnotho, ezimibalabala, ezokulwa namagciwane, ezingatheleleki, ezithinta imisindo futhi zikhululekile. Kuthandwa ngabanikazi bomhlobiso, ngakho-ke kufanele sikulondoloze kanjani ukusetshenziswa okuthile?
1. Susa zonke izinhlobo zokungcola emhlabathini ngesikhathi. Ngokungezelela ekuqobeni, uthele uketshezi olususelwa emanzini olusetshenziselwa ithawula bese uyesula.Izindawo ezinkulu zamafutha zingahlanzwa ngesikhafu; ukuphrinta kwe-offset emnyama kungatshelwa umshini wokupholisha ngephedi emhlophe yokugoba. Ngokuphrinta okudala kakhulu, ungathululela ukukhipha i-offset ngqo kwi-thaulo bese uyesula; futhi glue noma ukuhlafuna ushungamu nge-avreaser eqinile yobuchwepheshe bese uyesula ngqo ethawula.
2. Kuyenqatshelwa ukufaka phansi amanzi emanzini.Noma amanye amasitezi evaliwe ngerabha elingamanzi ukuzehlukanisa nomthombo wamanzi, ozofakwa emanzini isikhathi eside uzothinta kakhulu impilo yenkonzo yephansi yepulasitiki. Sebenzisa umshini wokubeka amanzi ukomisa amanzi ngesikhathi ngesikhathi sokuhlanza.
3. Ezindaweni ezinabantu abaningi nokugqoka okukhulu, isikhathi sokulondolozwa kufanele sifinyezwe futhi imvamisa ye-waxing yodonga oluphezulu kufanele inyuswe.
4. kwenqatshelwe ukusebenzisa izinto zokuhlanza ezinzima nezimbi, njengamabhola wensimbi wensimbi nezindwangu zokuhlanza eziyi-100, ukuvikela izinto ezibukhali zingashayisani naphansi.
5. Izinyawo ezilimele zingafakwa emnyango wezindawo zomphakathi ezinethrafikhi ephezulu ukuvimba izinto ezibukhali zingashayisani naphansi.
Ungayigcina kanjani ipulasitiki phansi Okuqukethwe okuhlobene